Nuxurka Kulan Dhexmaray Komishanka Doorashooyinka Qaranka Iyo Guddida Joogtada ee Golaha Guurtida Somaliland | Saxil News Network
Nuxurka Kulan Dhexmaray Komishanka Doorashooyinka Qaranka Iyo Guddida Joogtada ee Golaha Guurtida Somaliland
Hargeysa (Saxilnews.com)-Guddida Joogtada ee Golaha guurtida Somaliland ayaa maanta kulan xog wareysiya la yeeshay komishanka Doorashooyinka qaranka, Kulankaasi oo lagaga hadlay habsami u socodka diwaangalinta codbixiyayaasha iyo qabsoomida doorashooyinka 2017ka.
Kulankan Xogwaranka ah oo ka dhacay xarunta golaha guurtida Somaliland waxaa faahfaahin ka bixiyay hawlaha wacyigalinta diwaangalinta codbixiyayaasha iyo qabsoomida doorashada Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Eng Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo uu wehelinayo Afhayeenka komishanka Doorashooyinka Siciid Cali Muuse.
Guddoomiyaha komishanka Doorashooyinka waxaa uu warbixintiisa ku bilaabay sidan “Maanta waxaanu idinku wargalinaynaa inaad geed kasta iyo guri kasta gaadhsiisaan inaanay dhacayn diwaangalin laba goor la galo. Sababta aanay u dhacayni waxa weeye qalabka oo mid bu’da isha ayuu sawirayaa iyo wajiga oo labadaas arrimood ayaa is barbar yaala. Bu’da isha markuu sawiro, ka soo qaad milyan iyo laba boqol oo qof inaynu ugu talo galay diwaangalinta, waa laba milyan iyo afar boqol oo indhood, markaa qalabkani muddo aan ka badnayn 5 seken ayuu ku eegayaa intaas oo indhood oo haddii ishaadu la mid noqoto uu sheegayaa halkii uu qofkaasi iska diwaangaliya”ayuu yidhi Eng Cabdiqaadir Iimaan Warsame.
Afhayeenka Komishanka Doorashooyinka oo isna kulankan ka hadlay ayaa sheegay inay ku talo jiraan sidii dalka ay uga qaban lahaayeen diwaan galin xalaala taasi oo lagu diwaangalinayo muwaadin kasta oo gaadhay 16 jir.